Waxaan horay u ogaanay qiimaha noocyada Nubia Alpha | Androidsis
Nubia Alpha wuxuu ka mid ahaa aaladaha ugu xiisaha badnaa lagu soo bandhigay MWC 2019. Qalabkan, kalabarka u dhexeeya casriga iyo smartwatch, waa moodal halis ah. In kasta oo ay jiraan noocyo badan oo ka shaqeeya Android oo ka shaqeeya aaladda noocan ah, sida Samsung. Laga soo bilaabo waxa loo arkay inay awood ku leedahay qaybtan suuqan.
Shalay ayaa la xaqiijiyay in lagu daahfurayo Shiinaha ay dhici doonto Isniinta, Abriil 8. Inkastoo waqtigaas qiimaha waxba lagama oga in Nubia Alfa ay lahaan laheyd. Nasiib wanaag, ma ahayn inaan sugno waqti dheer si aan u ogaano. Tan iyo markii qiimaha noocyadooda la muujiyay.
Sida aan ku aragnay soo bandhigideeda MWC 2019, waxaan ka helnay dhowr nooc. Qiimaha mid kasta oo ka mid ah ayaa la muujiyay. Midka ugu horreeya waa nooca Nubia Alfa ee leh Bluetooth oo keliya. Xaaladdaada, waa tan ugu raqiisan, iyadoo qiimihiisu yahay 449 euro. Waxaa la filayaa inay gaarto Yurub rubuca labaad ee sanadka.
Dhinaca kale waxaan haynaa nooca leh eSIM ee Nubia Alpha. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo kiiskan ah, midka midabkiisu madow yahay iyo nooca dahabka ah ee 18-karat ah, oo aan horayba ugu arki karnay soo bandhigitaankeeda MWC. Waxay noqoneysaa mid ka mid ah moodooyinka ugu horreeya inaad la timaadid eSIM ilaa suuqa, waxay noqon doontaa rubuca sadexaad ee sanadkan.
Nooca madow waxaa lagu qiimeyn doonaa 549 euro, horay ayaa loo xaqiijiyay. Halka nooca dahabka karat ee 18 uu yahay midka ugu qaalisan dhamaan, sida la filan karo. Xaaladdaada, ayaa iman doona dukaamada leh qiimo dhan 649 euro. Labada xaaladoodba rubuckan saddexaad ee sanadka Yurub. Uguyaraan taas ayaa lafilayaa.
Marka taas bartamaha sanadkaan waa inaan horeyba u haysannaa Nubia Alpha suuqa Spain. Shaki la'aan, qalab ugu xiisaha badan, oo loogu yeeray inuu kacdoon ku sameeyo suuqa. Marka waxaan dheg u noqon doonnaa wararka ku saabsan bilaabitaankiisa gaarka ah, kolba haddii waqtiga sii socdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Qiimaha Nubia Alpha ayaa shaaca ka qaaday